အရှေ့အပိတ်အပြန့်သရ - ဝီကီပီးဒီးယား
အရှေ့အပိတ်အပြန့်သရ (အင်္ဂလိပ်: close front unrounded vowel, or high front unrounded vowel) သည် အပြောဘာသာစကားများစွာတွင် အသုံးပြုသော သရသံ အမျိုးအစားများထဲက ပုံစံတစ်ခုဖြစ်၍ နိုင်ငံတကာသဒ္ဒဗေဒအက္ခရာတွင် i (အီ) သင်္ကေတဖြင့်ပြသည်။ ဤသင်္ကေတသည် အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ meet မှ သရသံနှင့် ဆင်တူ၍ အမေရိကန်အင်္ဂလိပ်စကားတွင် long-e ဟူ၍ခေါ်ဆိုသည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားတွင် ဤသရသံတွင် ထပ်တိုးသံရှိန်ဆွဲ၍ /iː/ (အီး) ဖြင့်ပြသကြသည်။ ထိုအသံကို ပုံမှန်အားဖြင့် လုံချင်းသရသံဖြင့် ထွက်လေ့မရှိဘဲ သရတွဲသံ (diphthong) အနေအထားအနည်းငယ်ပါဝင်အောင် ထွက်ကြသည်။ အချို့ဒေသယိစကားများ၌ ဤအသံကို လုံးချင်းသရသံ သံရင်းအဖြစ် ထွက်ကြသည်ဟု သိရှိရသည်။ လုံးချင်းသရ [i] သံကို ဘာသာစကားများစွာ၌ ကြားရမည်ဖြစ်ပြီး ပြင်သစ်စကားတွင် chic ကို (အီ) အသံဖြင့်ထွက်ကြသည်။
ယခုဖာ်ပြထားသော အရှေ့ပိတ်အပြန့်သရနှင့် ခပ်နီးနီးတူသည့် အသံမှာ သရတစ်ဝက် ဗျည်းတစ်ဝက် အာခေါင်သံ (palatal approximant) [j] (-ယ်) သံဖြစ်သည်။ ထိုအသံနှစ်ခုမှာ ပုံပန်းသဏ္ဌာန်အရ အချိုးညီလုနီးပါးဖြစ်သည်။ ပြင်သစ်နှင့် အချို့သော ဘာသာစကားများ၏ သရတွဲသံများတွင် ထိုနှစ်လုံးသည် အပြောင်းအလဲရှိကြ၍ တူညီသောအသံထွက်ရှိရန် [i̯] နှင့် [j] ဟူ၍ မတူညီသော အသံဖလှယ်မှု စနစ်ဖြင့် ပြသအသုံးပြုကြသည်။
လက်တင်အက္ခရာအသုံးပြုသော ဘာသာစကားများတွင် ⟨i⟩ ဖြင့်ပြသသော်လည်း ခြွင်းချက်ရှိရာ အင်္ဂလိပ်စကားတွင် ထိုအက္ခရာသင်္ကေတကို bite ၌ /aɪ/ ၊ bit ၌ /ɪ/ အဖြစ်ရေးသားကြ၍ /iː/ အသံကို ရေးသားရာ၌ ⟨e⟩, ⟨ea⟩, ⟨ee⟩, ⟨ie⟩ or ⟨ei⟩ ဟူ၍ ရေးသားကြပြီး ဥပမာစကားလုံးများမှာ scene, bean, meet, niece, conceive တို့ဖြစ်ကြသည်။
မြန်မာဘာသာစကားရှိ သရသံများစွာထဲက အီ သရသံနှင့် လွန်စွာနီးကပ်သည်။ ဒန်းညာ ဂျုံးဇ်၏ အခြေခံသရ ရှစ်ခုထဲမှ i သရထက် မြန်မာတို့က လျှာကို အနည်းငယ်နိမ့်၍ အနောက်သို့အနည်းငယ်ထားကာ ထွက်လေ့ရှိပြီး နှုတ်ခမ်းပုံစံမှာ မပြန့်မဝိုင်း အနေအထားဖြစ်သည်။ သရသံတစ်ခုတည်းဖြင့်သာ ပြောဆို၍ သရတွဲသံမထွက်ရှိရချေ။
ယခုဖော်ပြပါ (အီ) သရ၌ လျှာသည် ခံတွင်း၌ အမြင့်ဆုံးအနေအထား၌တည်ရှိ၍ "အပိတ်" ဟုသုံးနှုန်းသည်။ ဗျည်းသံဖြစ်သည်အထိ မပိတ်ရပေ။
လျှာ၏ အနေအထားမှာ ခံတွင်း၏ အရှေ့ဖက်သို့ ရောက်ရှိနေသည်။
အပြန့်သရဟူ၍ ခေါ်ဆိုရာ၌ နှုတ်ခမ်းကို ဝိုင်း၍ မပြုလုပ်ရပေ။
↑ Maddox၊ Maeve။ DailyWritingTips: The Six Spellings of "Long E"။ July 20, 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Labov၊ William; Sharon၊ Ash; Boberg၊ Charles (2006)။ The Atlas of North American English။ Berlin: Mouton-de Gruyter။ chpt. 17။ ISBN 978-3-11-016746-7။
↑ L. E. Armstrong and Pe Maung Tin (1925)။ A Burmese Phonetic Reader: With English translation။ The London Phonetic Readers။ London: University of London Press။ This sound hasatongue position lower than that of Cardinal Vowel No. 1 , and retractedalittle from the front ; lip position , neutral . Many English speakers use the sound in words like eager , be , need . English learners who useadiphthong in pronouncing these words should be careful to avoid it in speaking Burmese
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အရှေ့အပိတ်အပြန့်သရ&oldid=563841" မှ ရယူရန်
၂၈ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၀:၃၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၈ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၀:၃၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။